एप्पल कम्पनीको लोगोमा काटिएको स्याउ किन राखिएको होला ? यस्तो छ रोचक रहस्य Bizshala -
एप्पल कम्पनीको लोगोमा काटिएको स्याउ किन राखिएको होला ? यस्तो छ रोचक रहस्य
काठमाण्डौ । एप्पलको आइफोन तथा अन्य ग्याजेट्सहरुको निकै ठूलो क्रेज छ विश्वभर । तपाईले पनि एप्पल कम्पनीको लोगो देख्नु भएकै होला । तर, के तपाईलाई थाहा छ, एप्पल कम्पनीको लोगोमा रहेको स्याउ थोरै काटिएको जस्तो किन भएको होला ? लोगोको रुपमा थोरै काटिएको स्याउको चित्र किन प्रयोग गरिएको होला भन्ने प्रश्नले तपाईको दिमागमा पनि अक्सर ठाउँ पाइरहेकै होला, तर हालसम्म यसको रहस्य तपाईलाई थाहा नहुनसक्छ । आज हामी यही रहस्य बताउन गइरहेका छौ ।
स्टीभ जब्सले आफ्ना २ साथीसँग मिलेर सन् १९७६ मा एप्पल कम्पनीको स्थापना गरेका थिए । तर, कम्पनीको लोगो चाहि रब जेनेफले सन् १९७७ मा तयार गरेका थिए । सिएनएनका अनुसार यो लोगोलाई तयार गरी उनले एप्पलका संस्थापक स्टीभ जब्सलाई देखाए । पहिलो नजरमै जब्सलाई काटिएको स्याउजस्तो यो लोगो मन परेको थियो ।
काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका ३६० भैँसीलाई...
काठमाण्डौ । आम रुपमा कारोबारमा सफल हुनका लागि कुनै उद्यमीलाई...
अब पराल र पातपतिङ्गरबाट पनि बिजुली उत्पादन संभव !
काठमाण्डौ । धान काटेपछि बाँकी रहेको पराल कतिपय ठाउँमा समस्याको...
अमेरिकामा फस्टाएको गज्जब व्यवसाय, अँगालो मारेरै लाखौंको कमाई
काठमाण्डौ । दुईछाक टार्नका लागि विश्वका लाखौं, करोडौं मानिसले...
काठमाण्डौ । आफ्नो करिअर र विजिनेशमा सफल हुनका लागि नयाँ–नयाँ...